ထင်းကနဲ မြင်နေရပြီး ရင်ဖို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းလွန်းနေတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် – Shwe Yoe
ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အထူးအားပေးမှုတွေကို ရရှိထားသူကတော့ သရုပ်ဆောင် ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ အားလုံးက သူမကို မမဆောင်းလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ဆိုနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်။ မမဆောင်းကတော့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုတိုင်အောင် အနုပညာအလုပ်တွေကို အပတ်တကုတ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့သူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
မမဆောင်းဟာ သူ့ကို ဝေဖန်သူများကိုလည်း အပြုံးလေးနဲ့သာ ဖြေရှင်းတတ်သူပါပဲနော်။ အင်တာဗျူးတိုင်းမှာလည်း ရည်းစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပဟေဠိလေးတွေ အမြဲပြောသွားလေ့ရှိသူပါနော်။ လောလောဆယ်မှာလည်းကြော်ငြာလေးတွေ အဆက်မပြတ် ရိုက်ကူးနေရသူပါပဲနော်။
မမဆောင်း ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာလည်း ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်။အရမ်းကို မိုက်လွန်းနေတဲ့ မမဆောင်းကို အားပေးကြပါဦး ပရိသတ်ကြီးရေ….
ရုပျရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ရိုကျကူးခဲ့ပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ အထူးအားပေးမှုတှကေို ရရှိထားသူကတော့ သရုပျဆောငျ ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျးပဲ ဖွဈပါတယျနျော။ အားလုံးက သူမကို မမဆောငျးလို့ ခဈြစနိုးချေါဆိုနကွေတာ ဖွဈပါတယျနျော။ မမဆောငျးကတော့ ဆယျစုနှဈတဈခုတိုငျအောငျ အနုပညာအလုပျတှကေို အပတျတကုတျကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့သူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော။
မမဆောငျးဟာ သူ့ကို ဝဖေနျသူမြားကိုလညျး အပွုံးလေးနဲ့သာ ဖွရှေငျးတတျသူပါပဲနျော။ အငျတာဗြူးတိုငျးမှာလညျး ရညျးစားနဲ့ပတျသကျပွီး ပဟဠေိလေးတှေ အမွဲပွောသှားလရှေိ့သူပါနျော။ လောလောဆယျမှာလညျးကွျောငွာလေးတှေ အဆကျမပွတျ ရိုကျကူးနရေသူပါပဲနျော။
မမဆောငျး ရကေူးဝတျစုံဝတျပွီး ရိုကျထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျဟာလညျး ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားသှားနိုငျခဲ့ပါတယျနျော။အရမျးကို မိုကျလှနျးနတေဲ့ မမဆောငျးကို အားပေးကွပါဦး ပရိသတျကွီးရေ….
မြင်သူတိုင်း ကြွေသွားစေလောက်အောင်ကို အရမ်း လှလွန်နေတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီး အိချောပို
လွတ်မြောက်နယ်မြေကနေ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင် တဲ့ သီချင်းလေး ကို ဆိုပြလိုက်တဲ့ မင်းသားချော ဟိန်းထက် (ရုပ်/သံ)
နတ်ပြည် မှာ တစ်ယောက် တောခို တာတစ်ယောက်နဲ့ ထောင် ထဲ မှာ တစ်ယောက်… အကုန်လုံးကို သတိရနေပါတယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော်နိုဗန်ထူး